यि चर्चित बलिउड कलाकार कोन्कणाको अनौठो जिवन : विवाहअगाडि नै गर्भवती अनि सम्बन्धविच्छेद ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/यि चर्चित बलिउड कलाकार कोन्कणाको अनौठो जिवन : विवाहअगाडि नै गर्भवती अनि सम्बन्धविच्छेद !
एजेन्सी । कलाकारहरुको जिवन पनि अनौठो हुन्छन् । समाजमा उदाहरणीय काम गरेर अरुका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने कलाकारका ब्यक्तिगत विवादित जिवनका कारण उनीहरुको करिअरमा पनि असर गर्छ । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री कोन्कणा सेन यस्तै विवादित छवि भएकी कलाकार हुन् । उनले गरेका कतिपय ब्यक्तिगत जिवनका निर्णयले उनलाई विवादित बनाएको हो ।
उनी अहिले ४१ वर्षकी भइन् । उनले आफ्नो जिवनमा गरेका केही निर्णयले उनको फिल्मी जिवनलाई नै असर गरेको छ । उनले आफ्ना लागि गरेका ‘बोल्ड निर्णय’ समाज र बलिउडले भने पचाउन सकेन । जसका कारण उनको फिल्मी जिवनमा असर गरेको थियो ।
उनले बालकलाकारको रुपमा नै आफ्नो करियरको यात्रा सुरु गरेर एउटा उचाई बनाएकी थिइन् । उनले सन् १९८३ मा नै बंगाली फिल्म ‘इंदिरा’ बाट करियरको सुरुवात गरेकी हुन् । त्यसपछि उनले बलिउड फिल्मबाट थुप्रै दर्शकको मन जितिन् ।
उनको ‘आजा नच’ फिल्मको सेटमा अभिनेता रणवीर शौरीसँग भेट भयो । उनीहरु नजिकिए । उक्त सेटमा नै उनीहरुको प्रेमसम्बन्ध सुरु भयो । अफेयरको क्रममा नै उनी गर्भवती भएको समाचार बाहिरियो । त्यसपछि उनले हतारमा विवाह गर्ने फैसला गरे । उनीहरुले हतारमा सन् २०१० मा विवाह पनि गरे । तर त्यो विवाह लामो समय टिक्न भने सकेन । विवाह गरेको केही महिनामै छोरालाई जन्म दिएकी कोन्कणाले वैवाहिक जिवनलाई लामो समय चलाउन सकिनन् ।
विवाहअगाडि नै गर्भवती भएर दुनियाँलाई चकित पारेकी सेनले सन्तान जन्माएलगत्तै सम्बन्धविच्छेद गरेपछि सबै हैरान भए । अलग भएको ५ वर्षपछि उनीहरुको कानुनी रुपमा सम्बन्धविच्छेद भयो